10 amin'ireo tononkalo tsara indrindra momba ny fiainana efa nosoratana - Blog
Tononkalo lehibe no mahay milaza ny tena votoatin'ny foto-keviny - ary rehefa tonga eo amin'ny fiainana izany, izany no fanamby.
Mba hisamborana zavatra izay miovaova be, fa mampifamatotra antsika mpirahalahy sy mpirahalahy kosa dia tena mitaky fahaizana sy asa tanana.
Soa ihany ho antsika, ireo poety tsara indrindra nandritra ny taona maro dia nanoratra andininy kilasika sy tsara tarehy maro hanampy antsika hahatakatra - nay decipher - fiainana amin'ny voninahiny rehetra.
Ireto ny 10 amin'ny tononkalo lalina sy misy dikany indrindra momba ny fiainana. Ny sasany lava, ny sasany fohy, ny sasany malaza, ny sasany tsy dia kely loatra.
Raha mijery amin'ny telefaona finday izahay, dia ampirisihinay hamadika ny tontolon'ny efijery mba hiantohana ny famolavolana ny tononkalo tsirairay rehefa mamaky azy ianao.
1. Salmin'ny fiainana nataon'i Henry Wadsworth Longfellow
Ity tononkalo miady rima ity dia ny spark izay afaka mamerina ny afo ao anatinao. Fanamby anao ny mivoaka ary miaina ny fiainanao amin'izao fotoana izao Mitovy amin'ny ' REHAREHANY ”Ary apetraho amin'ity tontolo ity ny marikao.
Mihetsika! Raiso ny andraikitra! Mahereza!
Aza milaza amiko, amin'ny isa misaona,
Ny fiainana dia nofinofy foana!
Fa maty ny fanahy izay rendremana,
Ary tsy toa ny zavatra miseho azy ireo.
Tena misy ny fiainana! Ny fiainana dia mazoto!
Ary tsy ny fasana no tanjony
Vovoka ianao, hiverina amin'ny vovoka indray,
Tsy niresaka momba ny fanahy.
Tsy fahafinaretana ary tsy alahelo,
Ny fiafarantsika na ny lalantsika voatendry
Fa ny mihetsika, izany rahampitso
Mitadiava anay lavitra kokoa noho ny anio.
Lava ny zavakanto, ary vetivety ihany ny fotoana,
Ary ny fonay, na dia mahery sy be herim-po aza,
Mbola mikapoka ihany, toy ny amponga gony
Diabe mankany amin'ny fasana.
Amin'ny sehatry ny ady lehibe an'izao tontolo izao,
Ao amin'ny bivouac an'ny fiainana,
Aza manahaka ny omby moana ary entina!
Mahereza amin'ny ady!
Aza matoky ny ho avy, nefa mahafinaritra!
Avelao ny maty handevina ny maty ao aminy!
Manaova, —tsara amin'ny ankehitriny!
Ry fo ao anatiny, ary Andriamanitra ô!
Ny fiainan'ny lehilahy lehibe dia mampatsiahy antsika rehetra
Afaka manao ny fiainantsika ho ambony isika,
Ary hiala, avelao izahay
Dian-tongotra amin'ny fasika ara-potoana
Dian-tongotra, izay angamba iray hafa,
Mandeha an-tsambo ny fiainantsika lehibe,
Rahalahy malahelo sy vaky sambo,
Raha mahita, dia handray am-po indray.
Andao isika hitsangana ary hanao,
Miaraka am-po amin'izay mety ho anjara
Mbola manatratra, mbola manohy,
Mianara miasa ary miandry.
2. Ny làlana tsy nalehan'i Robert Frost
Safidy mifandimby ny fiainana. Ity tononkalo malaza ity dia manomboka amin'ny tsorakazo amin'ny lalana ala ary mampiditra ny mpamaky amin'ny 'arabe' iray ho fitaovana hanazavana fa tsy maintsy misafidy lalana iray na hafa isika fa tsy tokony hivadika amin'ny fiainana.
Na aiza na aiza lalana alehantsika, tsy hitantsika mialoha izay hitondrantsika antsika, na ny ho vokatr'ilay faharoa.
Afaka manao izay fara herintsika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara isika, saingy tsy ho fantatsika velively hoe ohatrinona no ratsy kokoa na safidy tsara hafa mety nisy. Ary noho izany, tsy tokony hanenenantsika ny lalana tsy naleha.
Làlana roa no navily lalana tamin'ny hazo mavo,
Ary miala tsiny fa tsy afaka nandeha aho roa
Ary mandehana lavitra, efa ela aho no nijoro
Ary nijery ny farany ambany araka izay azoko natao
To izay niondrika tao anaty ala mikitroka
Avy eo naka ny iray hafa,
Ary manana ny fitakiana tsara kokoa angamba,
Satria bozaka sy maniry akanjo
Na izany aza ny fandalovana any
Tena nitafy azy ireo mihitsy,
Ary samy nandry teo iny maraina iny ihany
Amin'ny ravina dia tsy nisy dingana nifanitsahana mainty.
Oh, nitandrina ny voalohany nandritra ny andro hafa aho!
Na izany aza, ny fahafantarana ny lalana mankany amin'ny làlana,
Nisalasala aho raha mbola hiverina.
Misento aho milaza izany
Ny taona sy ny taona any ho any:
Làlana roa no nivily lalana anaty ala, ary izaho—
Noraisiko ilay tsy dia naleha intsony,
Ary izany no nahatonga ny fahasamihafana rehetra.
3. Raha— avy amin'i Rudyard Kipling
Hihaika anao ny fiainana - ara-batana, ara-tsaina, ara-pientanam-po ary ara-panahy. Ity tononkalo ity dia miantso anao hiaritra, handalo hatrany ary hihoatra ny zava-tsarotra hatrehinao.
izany mitaona , mandrisika, manome ohatra harahina. Toy ny fomba fahandro amin'ny fiainana izany - ary manome sakafo mahafa-po indrindra.
Raha afaka mitazona ny lohanao ianao raha ny momba anao rehetra
Very ny azy ary manome tsiny anao,
Raha azonao atokisana ny tenanao rehefa miahiahy anao ny olona rehetra,
Fa omeo vola ihany koa ny fisalasalany
Raha afaka miandry ianao fa tsy ho reraka amin'ny fiandrasana,
Na mandainga, aza mandainga,
Na mankahala, aza manome lalana ny fankahalana,
Na izany aza tsy dia tsara tarehy loatra, na aza miteny hendry loatra:
Raha afaka manonofy ianao, fa tsy manao ny nofy ho tomponao
Raha afaka mieritreritra ianao fa aza manao ny tanjonao ho tanjona
Raha afaka mihaona amin'ny Triumph and Disaster ianao
Ary raiso mitovy ireo impostor roa ireo
Raha mahazaka mandre ny fahamarinana nolazainao ianao
Voahodin'ny knaves mba hamandrihana ny adala,
Na mijery ireo zavatra nanoloranao ny fiainanao, tapaka,
Ary miondrika ary manangana azy ireo miaraka amin'ny fitaovana efa tonta:
Raha afaka manao antontam-bato iray ianao amin'ny fandresena rehetra azonao
Ary atahoranao amin'ny fihodinana iray,
Ary resy ary manomboka indray amin'ny fanombohanao
Ary aza miaina na oviana na oviana momba ny famoizanao
Raha afaka manery ny fonao sy ny hozatrao ary ny hozatra ianao
Mba hanompoanao ny anjaranao, rehefa lasa izy ireo,
Ary tano mafy raha tsy misy ao aminao
Afa-tsy ny Didim-pananana izay nilaza tamin'izy ireo hoe: 'Mihazona!'
Raha afaka miresaka amin'ny vahoaka ianao ary mitazona ny hatsaranao,
Na mandeha miaraka amin'i Kings - na very ny fifandraisana mahazatra,
Raha tsy mandratra anao ny fahavalo na ny namanao,
Raha manisa anao ny olona rehetra, nefa tsy misy be loatra
Raha afaka mameno ny minitra tsy mamela heloka ianao
Amin'ny hazakazaka lavitra enimpolo segondra '
Anao ny tany sy izay rehetra ao aminy,
Ary — izay ankoatr'izay - ho Lehilahy ianao, anaka!
4. Aza mandeha malefaka amin'izany alina mahafinaritra nataon'i Dylan Thomas izany
FAHAFATESANA dia tsy azo ihodivirana, ary araka ny voalazan'ity tononkalo ity ('fahafatesana' maizina ') dia marina izany. Fa namporisika antsika ny mpanoratra mba tsy hanaiky mora foana ny fahafatesana ary hiady ho an'ny fiainana ‘mandra-piaina farany antsika.
Mampahatsiahy antsika amin'ny fomba mahery sy maharesy lahatra fa mandalo vetivety ny fiainana ary tokony hampiasa ny fotoana betsaka ananantsika eto amin'ity planeta ity isika.
Aza mandeha moramora amin'izany alina mahafinaritra izany,
Ny fahanterana dia tokony hirehitra sy hanaitra rehefa akaiky ny andro
Fahatezerana, fahatezerana manoloana ny fahafatesan'ny hazavana.
Na dia hendry aza any am-parany, dia fantatry ny maizina,
Satria ny tenin'izy ireo dia tsy nisy tselatra varatra
Aza mandeha moramora amin'izany alina tsara izany.
Lehilahy tsara, ny onja farany teo, mitomany mamiratra toy inona
Mety ho nandihy tamin'ny helodrano maitso ny asany malemy,
Lehilahy dia izay nisambotra sy nihira ny masoandro tamin'ny sidina,
Ary mianatra, tara loatra, nampalahelo azy ireo teny an-dalana izy ireo,
Lehilahy fasana, akaikin'ny fahafatesany, mahita mahita ny mason'ireo
Ny maso jamba dia mety hirehitra toy ny meteor ary ho pelaka,
Ary ianao, raiko, any amin'ny havoana mampalahelo,
Ozony, tsofy rano aho izao, miaraka amin'ny ranomasonao masiaka, mivavaka aho.
5. Desiderata avy amin'i Max Ehrmann
Ity tononkalo prosa ity dia toy ny torolàlana ho an'ny fiainana. Mampitraka izaitsizy tokoa ary manamafy ny fiainana ho zavatra tokony hotetezina mivadika ary fangorahana.
Izy io dia mikasika faritra maro misy eo amin'ny fifandraisantsika sy ny karierantsika ka hatramin'ny fahanterantsika sy ny fahasalamantsika ara-tsaina.
Marina tokoa, fitambarana lalina sy misy dikany raha nisy izany.
Mandehana milamina eo afovoan'ny tabataba sy ny fahamaimaizana, ary tsarovy izay fiadanam-po mety hisy ao amin'ny fahanginana Araka izay azo atao, tsy mila mitolo-batana, dia mirary soa amin'ny olona rehetra.
Lazao mangingina sy mazava ny fahamarinanao ary henoy ny hafa, eny fa na dia ny olona tsy mailo sy tsy mahalala aza dia manana ny tantarany koa.
Halaviro ny olona mahery vaika sy mahery setra fa manafintohina ny fanahy izy ireo. Raha mampitaha ny tenanao amin'ny hafa ianao dia mety ho lasa tsy misy dikany na mangidy, satria hisy olona lehibe kokoa sy ambany noho ianao foana.
Ankafizo ny zava-bitanao ary koa ny drafitrao. Tohizo ny fahaliananao amin'ny asanao manokana, na izany aza manetri-tena dia fananana tokoa amin'ny fiovan'ny fotoana.
Mitandrema amin'ny raharaham-barotrao, fa feno hafetsena ity tontolo ity. Fa avelao ity tsy hanajamba anao ny amin'ny toetra tsara izay ilofosan'ny olona maro ho filamatra ambony, ary na aiza na aiza dia feno herim-po ny fiainana.
Mijanòna ho ianao ihany. Aza miseho ho tia. Ary aza miahiahy momba ny fitiavana manoloana ny fahamainana sy ny tsy fahafaham-po rehetra dia maharitra mandrakizay toy ny ahitra.
Raiso am-pitiavana ny torohevitra nandritra ny taona, manolotra am-pahasoavana ny zavatry ny fahatanorana.
Mamboly herin'ny fanahy hiaro anao amin'ny loza tampoka. Aza atao mahakivy sary an-tsaina anefa ny tenanao. Tahotra maro no ateraky ny havizanana sy manirery.
Mihoatra ny fifehezana mahasoa dia malemy paika amin'ny tenanao. Ianao dia zanaky izao rehetra izao tsy latsaky ny hazo sy ny kintana izay anananao eto.
Ary na mazava aminao na tsia, dia tsy isalasalana fa misokatra araka ny tokony ho izy izao rehetra izao. Koa mihavàna amin'Andriamanitra ianao, na iza na iza heverinao fa misy azy. Ary na inona na inona ny asanao sy ny hetahetanao, ao anatin'ny fikorontananan'ny fiainana mitabataba, milamina ny fanahinao. Miaraka amin'ny endrik'izy ireo sy ny nofisony ary ny nofinofiny potika, dia mbola tontolo tsara tarehy izy io. Mifalia. Miezaha ho sambatra.
6. Fialam-boly nataon'i W. H. Davies
Ity tononkalo fohy ity dia mety tsy ho manan-danja kokoa amin'ny tontolon'ny ankehitriny raha nanandrana izy. Manoro hevitra antsika izy mba hanokana fotoana 'hijoroana sy hijerena' na, raha lazaina amin'ny teny hafa, hampiadana sy handinika ny hatsarana rehetra manodidina anao.
Aza avela hirohotra izao tontolo izao tsy misy fampandrenesana hanokatra ny masonao ka hahita - tena hahita - azy amin'ny voninahiny rehetra. Makà toerana amin'ny fiainanao amin'ity fialam-boly tsotra indrindra ity.
Inona ity fiainana ity raha feno fikarakarana
Tsy manam-potoana hijoroana isika.
Tsy misy fotoana hijoroana ambanin'ireo rantsana
Ary mizaha raha mbola ondry na omby.
Tsy misy fotoana hijerena, rehefa mandalo ny ala isika,
Ao amin'ny manafina ny voany amin'ny ahitra ny squirrels.
Tsy misy fotoana hijerena, amin'ny antoandro,
Rano feno kintana, toy ny lanitra amin'ny alina.
Tsy misy fotoana hitodihana ny mason'i Beauty,
Ary jereo ny tongony, ny fomba fandihizan'izy ireo.
Tsy misy fotoana hiandrasana mandra-pahatongan'ny vavany
Nanankarena izay mitsiky nanomboka ny masony.
Fiainana mahantra ity raha feno fikarakarana
7. Fahafahana nataon'i Berton Braley
Mety hanontany tena ianao hoe inona ny tanjon'ny fiainana raha ny ataonao fotsiny dia ny mamerina izay nataon'ny hafa talohanao. Mampahatsiahy antsika ity tononkalo ity fa tsy mankaleo ny famoronana izao tontolo izao ary mpamorona ianao.
Miresaka asa lehibe sy asa lehibe, nefa koa fitiavana sy tantaram-pitiavana ary fihomehezana ary tsy fivadihana - zavatra azon'ny lehilahy na vehivavy atao.
Omeo lanja izay tokony ho anjara birikinao amin'ity tontolo ity.
Voadona ianao noho ny fisalasalana sy ny famoizam-po
Mieritreritra ianao fa tsy misy vintana ho anao, anaka?
Fa, ny boky tsara indrindra tsy mbola nosoratana,
Ny hazakazaka tsara indrindra dia mbola tsy nihazakazaka,
Ny isa tsara indrindra dia mbola tsy vita,
Ny hira tsara indrindra dia mbola tsy nohiraina,
Ny feon-kira tsara indrindra dia mbola tsy nilalao,
Mifalia, fa tanora izao tontolo izao!
Tsy misy kisendrasendra? Maninona izao tontolo izao dia mazoto fotsiny
Ho an'ireo zavatra tokony noforoninao,
Ny fitehirizana ny tena harena dia mbola kely ihany,
Tsy mijanona ary lehibe ny filàna,
Maniry mafy hery sy hatsarana bebe kokoa izy,
Hehy sy fitiavana ary tantaram-pitiavana bebe kokoa,
Fahamendrehana bebe kokoa, asa ary adidy,
Tsy misy kisendrasendra – maninona no tsy misy afa-tsy ny kisendrasendra ihany!
Fa ny andininy tsara indrindra dia mbola tsy nasiana rima,
Ny trano tsara indrindra dia mbola tsy nomanina,
Ny tampon'isa ambony indrindra dia mbola tsy nianika,
Ny renirano mahery indrindra dia tsy voaharo,
Aza matahotra sy mikorontan-tsaina, reraka fo,
Vao nanomboka ny vintana,
Ho an'ny asa tsara indrindra dia mbola tsy natomboka,
Ny asa tsara indrindra dia mbola tsy vita.
8. Inona no fiainana tokony hisy an'i Pat A. Fleming
Rehefa miala amin'ny sanganasa malaza sy mahazatra isika dia mahita an'io tononkalo iray tononkalo nataon'ny mpanoratra amateur io (mampiseho fotsiny fa afaka mamorona sanganasa misy dikany lehibe ny rehetra).
Mitovy amin'ireo tononkalo fanta-daza etsy ambony ireo, miresaka antsika amin'ny fomba tokony hiezahantsika hiaina ny fiainantsika izy io. Tsotra izany, nefa manome aingam-panahy.
Hianatra raha mbola zaza
Inona no dikan'ity fiainana ity?
Ny fahafantarana azy dia mihoatra ny tenako,
Mihoatra lavitra noho ny ahy izany.
Mba handresena ireo voina,
Ho tafavoaka velona amin'ny fotoana sarotra indrindra.
Miatrika ireo fotoana feno fanaintainana,
Ary mbola tsara fanahy ihany.
Miady ho an'ireo izay tsy afaka ny tenany,
Hizara ny hazavako foana.
Miaraka amin'izay mirenireny ao amin'ny maizina,
Tia amin'ny heriko manontolo.
Mbola hijoro amin-kerim-po,
Na dia mijoro irery aza aho.
Mbola mifoha sy miatrika isan'andro,
Na dia mahatsiaro irery aza aho.
Mba hiezaka hahatakatra ireo
Izay tsy misy miraharaha ny hahalala.
Ary ataovy tsapany fa misy dikany izy ireo
Rehefa navelan'izao tontolo izao handeha izy ireo.
Ho vatofantsika, matanjaka sy marina,
Io olona mahatoky hatramin'ny farany io.
Ho loharanom-panantenana tsy tapaka
Ho an'ny fianakaviako sy ny namako.
Hiaina fiainana mendrika
Hizara ny foko sy ny fanahiko.
Raha milaza foana aho dia miala tsiny
Rehefa nanisy ratsy ny namana sy ny fahavalo aho.
Mba hireharehana amin'izay nanandramako ho,
Ary ity fiainana ity no nofidiako hiaina.
Amin'ny fanomezana izay rehetra tokony homeko.
Amiko izany no tokony hisy ity fiainana ity,
Amiko izany no ilana azy.
Handray izay nomen'Andriamanitra ahy
Ary ataovy betsaka kokoa
Mba hananana fiainana manandanja,
Ho olona manan-danja be.
Tia sy tiana ho setriny
Ary ataovy eto an-tany ny mariko.
9. Inona ny fiainantsika? nataon'i Sir Walter Raleigh
Ity no tononkalo fohy indrindra ao amin'ny lisitra amin'ny andalana 10 fotsiny, fa mamintina ny fomba tsy tokony horaisina ho zava-dehibe ny fiainana . Fa kosa, nanolo-kevitra ny mpanoratra fa hatsikana ny fiainana ary ny tany no anjarantsika.
Ka inona no tokony hataontsika? Mihetsika tsara. Mampihomehy ny olona. Milalao ny anjarantsika eto amin'izao tontolo izao mandra-pilaky ny ridao ary hiala amin'ity fiainana ity isika.
Inona ny fiainantsika? Ny lalao filan'ny nofo.
Ny hafaliantsika? Ny mozikan'ny fizarazarana:
Ny tranon-drenintsika dia ny trano mandreraka,
Izay itafiana antsika amin'ny hatsikana fohy amin'ny fiainana.
Ny tany sehatra an-danitra mpijery,
Izay mipetraka ary mijery an'iza no manao diso.
Ireo fasana manafina antsika amin'ny masoandro mahamay
Toy ny lambam-baravarana namboarina rehefa vita ny lalao.
Noho izany dia milalao lahatsoratra izahay amin'ny fitsaharana farany,
Ary maty amin-kitsimpo isika fa tsy amin'ny hatsikana.
10. The Builders avy amin'i Henry Wadsworth Longfellow
Nanomboka tamin'ny tononkalo nosoratan'ity mpanoratra ity izahay ary noho izany dia hifarana amin'ny iray hafa. Ampianarina antsika eto fa ny fiainana dia mipetraka eo an-tampon'ny vatan'ny fotoana ary ny fihetsika ataontsika ankehitriny dia mahatonga ny marainantsika.
Isika no mpanao mari-trano sy mpanangana ny fiainantsika ary raha te hahatratra ny kinovan'ny fahombiazantsika isika dia tsy maintsy manao asa mafy sy hery.
Izy rehetra dia arisiteran'ny Fate,
Miasa amin'ireo rindrin'ny Fotoana ireo
Ny sasany manana asa lehibe sy lehibe,
Ny sasany manana haingo amin'ny rima.
Tsy misy tsy ilaina, na ambany
Ny zavatra tsirairay amin'ny toerany dia tsara indrindra
Ary inona no toa fampisehoana tsy miasa
Manamafy sy manohana ny ambiny.
Ho an'ny rafitra atsangatsika,
Ny fotoana dia feno fitaovana feno
Ny anio sy ny antoandro
Ireo sakana iorenantsika ve.
Tena endrika sy lamaody ireo
Aza avela hisy banga mangariny eo anelanelany
Aza mieritreritra, satria tsy misy mahita,
Tsy ho hita intsony ny zavatra toy izany.
Tamin'ny andro fahanton'ny Art,
Ny mpanao trano no niasa tamim-pitandremana fatratra
Isa-minitra sy ampahany tsy hita
Ho hitan'ireo Andriamanitra hatraiza hatraiza.
Andao hanao ny asantsika koa,
Na ny tsy hita na ny hita
Ataovy ny trano, izay itoeran'andriamanitra,
Kanto, iray manontolo ary madio.
Raha tsy izany dia tsy feno ny fiainantsika,
Mijoro eo amin'ireto rindrin'ny Fotoana ireto,
Tohatra tohatra, izay misy ny tongotra
Tafintohina rehefa mitady hianika.
Manorata anio, avy eo, matanjaka sy azo antoka,
Miaraka amin'ny fototra mafy sy ampy
Ary miakatra sy milamina
Rahampitso hahita ny toerany.
Irery irery no ahafahantsika mahazo izany
Ho an'ireo turrets ireo, izay misy ny maso
Mahita an'izao tontolo izao ho lemaka lehibe iray,
Ary lanitra iray tsy misy fetra.
tena mankaleo ahy amin'ny fiainako aho
hafiriana ianao no mifankatia
barrona trompetra amin'ny tongotra
maninona aho no resy eo amin'ny fiainana
Miezaka mamerina ahy ve ny olon-tiako taloha